GNOME dia mandray an'i Warp amin'ny faribolana fampiharana | ubunlog
Miditra ao amin'ny faribolana GNOME i Warp, anisan'ny fiovana misongadina indrindra amin'ity herinandro ity
pablinux | 21/05/2022 11:43 | GNOME, Ubuntu
Herinandro lasa izay, taorian'ny nanononana ny fanovana ny toromarika ny GNOME, mamoaka izahay ny vaovaon'ny herinandro #43 hatramin'ny nivoahan'ity hetsika ity, tena mitovy amin'ny an'ny KDE. Nitantara taminay ny iray tamin’izy ireo tenany, fampiharana toa ny dika karbaona an'ny Linuz Mint's Warpinator, farafaharatsiny amin'ny foto-kevitra sy anarana. Ireo karazana fampiharana ireo dia miasa tsara amin'ny fitaovana Apple, satria matetika izy ireo dia tsy mijanona amin'ny filazana fa ny fampiharana sy serivisy toa ireny dia mifototra amin'ny AirDrop an'ny Apple, ary amin'ny Linux dia efa manana safidy roa farafahakeliny izahay izay manome vokatra tsara.
Ity iray ity herinandro, noraisina tsara ny tetikasa warp ho faribolana ny GNOME. Tsy nanonona zava-baovao izy, fa nanatevin-daharana izay heverin'izy ireo ho faribolana, izany hoe, fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo tsara ho tohanan'ireo tompon'andraikitra amin'ny desktop Linux be mpampiasa indrindra. Ny sisa amin'ny vaovao izay nambara taminay androany dia ny anao eto ambany.
Ity herinandro ity ao amin'ny GNOME
Navoaka ny Pika Backup 0.4, ary maka ny sandan'ny asa mandritra ny herintaona, miaraka amin'ny backup voalahatra, famafana ireo rakitra taloha mifototra amin'ny fitsipika, ary interface tsara mifototra amin'ny GTK4 sy libadwaita.
Crossword 0.3.0 dia navoaka, ary io no dikan-teny voalohany azo jerena Flathub. Ankehitriny dia manohana rakitra .puz izy, manana maody maivana sy maizina, misy bokotra manolotra soso-kevitra ary manohana piozila ivelany.
Nangina nandritra ny fotoana ela ny Telegrand, fa ity mpanjifa Telegram ho an'ny GNOME ity dia eo an-dalam-pandrosoana ary nampiditra endri-javatra vaovao toy ny:
Fampiharana ny tatitra momba ny fihetsiky ny mpampiasa (ohatra, ny mpampiasa manoratra na mandefa sary).
Fampiharana karazana hetsika hafatra (ohatra, mpampiasa miditra vondrona).
Nampiharina ny fandefasana sarin'ny hafatra.
Nohatsaraina ny endriky ny fampidirana hafatra.
Nampiana fifantenana ny kaody firenena amin'ny telefaona amin'ny dingana fidirana.
Nampiana endrika fanamarinana bebe kokoa (ohatra, amin'ny SMS, antso na antso tselatra).
Afeno ny fampidirana hafatra rehefa tsy ilaina (ohatra, raha ao anaty fantsona).
Nampiana ny fahafahana mamafa hafatra.
Nohatsaraina ny fikorianan'ny tantaran'ny chat (mivadika ho any ambany izany ankehitriny).
Nampiana ny fahafahana manindrona/manaisotra chat.
Fahaizana manokatra chat relative amin'ny fipihana fampahafantarana.
Ny Geopard 1.1.0 dia tonga miaraka amin'ny endrika nohatsaraina, nampiana habaka bebe kokoa eo anelanelan'ny rohy mba hanamora ny fipihana eo amin'ny efijery kely, nampiana ny mety ho zooming ary nampiana bokotra iray ho an'ny streaming, izay ao anatin'ny phase alpha amin'izao fotoana izao. .
Navoaka ny kinova vaovao an'ny Amberol, miaraka amin'ny fanamboarana maro, fanatsarana UI mandray andraikitra ary fanamboarana hafa, anisan'izany ny sasany mifandraika amin'ny fidirana.
Ary izany dia tamin'ity herinandro ity tao amin'ny GNOME.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » GNOME » Miditra ao amin'ny faribolana GNOME i Warp, anisan'ny fiovana misongadina indrindra amin'ity herinandro ity
KDE dia namoaka ny Plasma 5.25 beta ary tamin'ity herinandro ity dia nifantoka tamin'ny fanamboarana ny bibikely
Navoaka ny kinova Inkscape 1.2 vaovao